Indawo Yokuphrinta Incwadi Yezingane-BPC(Ukubhebhana.com)-Ukuphrinta kwe-Blog-Book China
Indawo Yokuphrinta Incwadi Yezingane-BPC(Ukubhebhana.com)
isikhathi: 2018-08-22 Okuhamba phambili kwe-: 253
Lapho uhlanganyela le ncwadi yezithombe nezingane zakho, will you think of the efforts made by BPC's Factory for your warmth at this moment?
Kulezi zinsuku, ngentuthuko yemfundo yokuqala emhlabeni, children's books printing zithandwa kakhulu. Abazali abaningi nezingane bayakujabulela ukuthola incwadi enhle yezithombe. Ukuphrinta kwe-BPC kuzibophezele ekwakheni ulwazi oluhle lokufunda lwezingane. Sikhetha uwoyela wokuphrinta onempilo nokahle&iphepha ukuqinisekisa ukuthi kufundelwa izingane ngokuphepha.
Incwadi yezingane yazalwa kanjani eBPC Printing Factory?
Okokuqala nje, pre-press designettingting. Ekuphrinteni kwe-BPC,Ukuphrinta Imisebenzi, silungile ekunikezeni abaklami iziphakamiso zombala ezifanele zokuphrinta, ukuze kuhlanganiswe umqondo wabaklami, xazulula izinkinga ohlangane nazo kunqubo yangaphambilini yokuphrinta ngaphambi kwesikhathi futhi ugweme ukuphambuka. Yenza isigaba sokuqala semizamo yedethi efanele.
Lapho-ke ukubambisana kobuchwepheshe bokuphrinta, ukuphrinta kokuhlolwa ngakunye kwamakhasi, kunqubo yokulungisa ukuphrinta kwesilingo somshini, abaklami bangaya ngqo kusayithi lokuphrinta ukuze bashintshe izidingo zokuphrinta nemiphumela yangempela, ngokusho komphumela wangempela wokulungisa isikimu sokufanisa umbala wokuphrinta ukuthola umphumela omuhle wokuphrinta wombala amakhasimende awufunayo.
Ekugcineni, inqubo yokubopha ngemuva kokucindezela, hhayi lapho kuqala khona ukuphrinta, sinendlela ephelele yokugcina isampula, sakha nezindawo zesampula kunqubo ngayinye yokushicilela, ukuze kuqinisekiswe ukuthi iningi lezimpahla liphuma ngasikhathi sinye lithola izincwadi zesampula ezinhle kakhulu ezandleni zamakhasimende.
Ngeminye imininingwane nge-BPC Book Printer, sicela unake i-www.bookprintingchina.com, noma wenze i-aphoyintimenti ngqo ukubona imboni nge sales@bookprintingchina.com.
Okwangaphambilini Ikhasi : Ungayikhetha kanjani ifektri yokuphrinta yezincwadi enamandla nethembekile kumabhizinisi amaningi wokuphrinta waseChina?
Ikhasi Elilandelayo : I-BPC(Ukubhebhana.com)-22 ukuphrinta kwezincwadi ngobuhlakani